Mareykanka oo Sadax ka mid ah Xubnaha ugu Muhiimsan shabaab oo uu ku Jiro Madaxa amniyadka Mahad Karate ku dartay Liiska argagixisada caalamka.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Mareykanka oo Sadax ka mid ah Xubnaha ugu Muhiimsan shabaab oo uu...
Mareykanka oo Sadax ka mid ah Xubnaha ugu Muhiimsan shabaab oo uu ku Jiro Madaxa amniyadka Mahad Karate ku dartay Liiska argagixisada caalamka..
Dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku celisay in ay Soomaaliya la garab taagan tahay hiil iyo hoo ku saabsan sidii ay nabadda u soo celin lahayd islamarkaana uga adkaan lahayd Al-Shabaab.
Ku simaha Waliika Mareykanka ee Qaramada Midoobay, Richard Mills, ayaa isagoo ka hadlayay kulankii Golaha Amaanka ee xaaladda Soomaaliya waxa uu sheegay in Washington ay liiska cunaqabateynta ku dartay saddex xubnood oo ka tirsan al-shabaab, kuwaasoo xayiraado si gaar ah loo saarayo.
“Dowladda Mareykanku wali waxay diiradda saareysaa xakameynta awoodda Al-Shabaab ay ku fulin karaan weerarrada ka dhanka ah rayidka, waxayna diyaar u tahay in ay wadashaqeyn la sameyso dowlad goboleedyada si loo hirgeliyo qaraarka cunaqabateynnada Soomaaliya ee tirsigiisu yahay 751,” ayuu yiri Richard Mills.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu magacaabay xubnaha cusub ee lagu daray liiska cunaqabateynta Mareykanka.
Isagoo sii hadlayey ayuu yiri, “Annagoo taas ka duuleyna, waxaan ku faaneynaa inaan maanta caddeyno in aan annaga iyo dowladda Soomaaliya si wadajir ah u magacawno saddex hoggaamiye oo ka tirsan Al-shabaab oo lagu daray liiska cunaqabateynta, kuwaasoo magacyadoodu kala yihiin: Abuukar Cali Aadan, Macallin Ayman iyo Mahad Karate”.
“Tallaabadan cunaqabateynta ah waxay ka turjumeysaa in beesha caalamku ay la xisaabtameyso dadka wiiqaya nabadda Soomaaliya, amniga iyo xasiloonida,” ayuu yiri Danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay.
Previous articleWasiirkii Hore Amniga Xundubay oo Xasuuq shacab maalinta Jimcaha
Next articleGolaha Wakiillada Garissa oo cod ku ansixiyay hindise sharciyeedka aftida qaran ee Kenya.
Boqortooyada Ingiriiska oo cunaqabateyn saartay 22 shaqsi oo 14 ka mid...
Mohamed Abdullahi Mohamed - April 27, 2021 0
. Boqortooyada Ingiriiska ayaa cunaqabateyn saartay 22 shaqsi oo 14 ka mid ah ay u dhasheen Ruushka, kuna lug lahaa kiisas musuqmaasuq oo ku saabsan...
Diiq loo adeegsaday inuu la dagaallamo Diiq kale oo sababay inuu...
afar Mishiin oo ah kuwa neefta siiya ee Oxygen oo ganacsato...
3 Walaalo ah oo dgowr Saacad gudahood lagu dilay Dalka Mareykanka
Xilka Dag Dag Halooga Qaado Gudoomiye Cali Yare.
guddoomiyihii degmada Xamar Jajab xalay la dilay oo la sheegay in...
Madaxweynahq Waqtigiisa dhamaaday oo kulan la leh laamaha Amniga